‘भारतमा हामी महामारीको होइन, मानवताविरुद्ध अपराधको साक्षी भइरहेका छौँ’ - चौतारी पोष्ट अनलाइन
‘भारतमा हामी महामारीको होइन, मानवताविरुद्ध अपराधको साक्षी भइरहेका छौँ’
– अरुन्धती राेय
सन् २०१७ मा उत्तर प्रदेशको चुनावीसभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारको उछितो काडिरहेका थिए । मञ्चबाट उनको आरोप थियो– उत्तर प्रदेश सरकारले मुस्लिमलाई बढी प्राथमिकता दियो । मोदी गर्जिएका थिए, ’यदि कब्रिस्तान बनाइन्छ भने घाट पनि बन्नुपर्छ ।’
’के १ अर्ब ३० करोड भारतीय जनता एकान्तबासमा रहन सक्लान् ?,’ भारतमा फैलिइरहेको कोरोना महामारीबारे वासिङ्टन पोस्टले आफ्नो सम्पादकीयमा प्रश्न उठाएको छ । सम्पादकीयमा उत्तर पनि छ– ’यो सहज छैन ।’
मोदीले भनेका थिए, ’यो विषम परिस्थितिमा भारतीय जनताको तर्फबाट मैले सकारात्मक र आत्मविश्वासिलो सन्देश लिएर आएको छु । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी भारत प्रताडित हुन्छ भन्ने गरिएको थियो । ७० करोडदेखि ८० करोड भारतीय कोरोनाबाट संक्रमित हुने र २० लाख मानिस मर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा अरु देशसँग भारतको तुलनै हुन सक्दैन । विश्वकै १८ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने भारतले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालेकै कारण ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको छ ।’
भारतमा कोभिडको पहिलो लहर साम्य भएपछि सरकार समर्थितहरूले विजय महसुस गरेका थिए । द प्रिन्टका अनलाइन संस्करणका सम्पादक शेखर गुप्ताले लेखेका थिए, ’अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव छैन । घाटहरू भरिएका छैनन् । अवस्था यति राम्रो छ कि पत्याउन मुस्किल छ । तपाईं असहमत हुनुहुन्छ भने तथ्यांकसहित उपस्थित हुनुहोस् । अन्यथा स्थिति फेरि भयावह हुन्छ भन्दै भगवान् बनेर भविष्यवाणी गर्न बन्द गर्नुस् ।’
मोदीले भाषणमा प्रस्तुत गरेजस्तो घमण्ड अब कहाँ बाँकी रह्यो र ? संक्रमितका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । अस्पतालमा जीवितको भन्दा मृतकको संख्या बढी छ । अस्पतालकै प्राङ्गणमा बिरामीको ज्यान गएको छ । दिल्लीका घाटहरूमा दाउरा छैन । स्थिति यति कहालीलाग्दो छ कि पार्क र पार्किङस्थलसमेत घाटमा परिणत भइसके ।भारतको स्टक एक्सचेन्जमा नाजुक अवस्थामा रहेको कम्पनीको झैँ हालत छ अक्सिजनको पनि । सबै अस्पतालमा बेड र अक्सिजनका लागि गुहार मागिरहेका भेटिन्छन् । अक्सिजनको कालोबजारी फस्टाइरहेको छ । अक्सिजन संतृप्ति यन्त्र र आवश्यकीय औषधि सहजै आयात भइरहेका छैनन् ।
मानिसहरू कुन हदसम्म पीडित छन्, यी अराजकताले पु¥याएका आघातले नै बताउँछ । दिल्लीको गाजियाबादमा एक परिवार बसोबास गर्दै आएको थियो । परिवारमा रहेकामध्ये तीन जनालाई कोरोना भयो । आमा सिकिस्त थिइन्, अस्पतालमा बल्लतल्ल उपचार हुने भयो । यता बुबालाई मानसिक समस्या थियो । बुबालाई परामर्श दिइरहेकी चिकित्सकले पनि कोरोनाका कारण हालसालै पति गुमाएकी थिइन् । चिकित्सकको प्रयासका बाबजुद मानसिक रोगी बुबालाई उनले बचाउन सकेनन् । उनी कोरोनाका कारणले होइन, उच्च रक्तचापका कारण बितेका थिए ।
’अन्तिम संस्कार कसरी ग¥यौ ?,’ मैले सोधेँ ।
’चिनजानका सबैलाई फोन गरेँ तर अनिर्बन भट्टाचार्य मात्रै सम्पर्कमा आए,’ बुबा गुमाएका ती युवाले भने । भट्टाचार्य सामाजिक अभियन्ता हर्स मन्दरसँग सहकार्य गर्दै काम गर्छन् । भट्टाचार्य ती व्यक्ति हुन्, जो पक्राउ सूचीमा समेत छन् । सरकारले उनलाई नागरिकता विधेयकको विरोध ¥यालीमा मानिसहरू परिचालन गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्न खोजेको हो । तर, जहाँ सरकारको उस्थिति हुँदैन, त्यहाँ सधैँ भट्टाचार्य पुग्ने गर्छन् । उनले शव व्यवस्थापनका लागि साधन उपलब्ध गराउँछन् । बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन एम्बुलेन्सको जोहो गरिदिन्छन् । उनीहरूको स्वयम् सेवा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण छ । आफू जोखिममा रहेरै अरुका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहोमा दिनरात खटिइरहेका छन् ।
अक्सिजनको अभाव कति छ भन्ने कुरा अस्पतालले बिरामीलाई आफैँ अक्सिजन ल्याउन सूचित गरेबाटै थाहा हुन्छ । गत २२ अप्रिलमा दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा उच्च चापको अक्सिजन लिएर उपचार सेवा लिइरहेका २५ जनाको मृत्यु भयो । उनीहरूको मृत्युलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालले भन्यो, ’उनीहरू अक्सिजनको कमीका कारण मरेको भन्ने कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन ।’
२४ अप्रिलमा जयपुर गोल्डेन अस्पतालमा समेत यस्तै घटना दोहोरियो, त्यहाँ एकैदिन २० जनाको ज्यान गयो । दिल्ली हाईकोर्टबाट महाधिवक्ता तुसार मेहेताले सरकारको तर्फबाट बोल्दै भने, ’कसैलाई पनि अक्सिजनको अभाव हुन नदिनेमा सरकार प्रतिवद्धत छ । त्यसका लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । सरकारको प्रयासमा विश्वास गरौँ, कोकोहोलो नमच्चाऔँ ।’
यो घटनाबाट उत्तर प्रदेशमा बाँच्ने हो भने अन्यायविरुद्ध पनि उजुरी नगर्नू भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्ता विषय उत्तर प्रदेशमा मात्रै सीमित छैन । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले पनि यस्ता चेतावनी दिइरहेको छ । सो संगठनका प्रवक्ताले भनेका छन्, ’भारतविरोधी शक्तिहरू विभिन्न अफवाह फैलाउन उद्यत छन् । त्यस्ता अफवाहविरुद्ध मिडियाले सामग्री उत्पादन गर्दै सकारात्मक वातावरण पैदा गराउनू ।’
सन् २०१८ मा सालिक उद्घाटनका लागि पुगेका मोदी । तस्वीरः एएफपीसन् २०१८ मा सालिक उद्घाटनका लागि पुगेका मोदी । तस्वीरः एएफपी
उनीहरूले देख्न पाउनेछन् ध्वस्त पारिएको आदिवासी सभ्यता । त्यो जलाशयमा महसुस गर्न सक्नेछन् उनीहरूको चीत्कार । नियाल्न पाउनेछन् जलाशयभित्रै डुबेको आदिवासीहरूको खुसी । मलाई जसले प्रभुभाइ मरेको खबर सुनाएकी थिइन्, उनै साथीले भनिन्, ’केभादियामा कोरोनाको अवस्थाबारे तिमीलाई जानकारी गराउन मेरो हात नै कामिरहेको छ ।’
गाजियाबादमा अक्सिजनको प्रतीक्षामा रहेका कोरोना संक्रमित । तस्वीरः अद्नान अविदी÷रोयटर्सगाजियाबादमा अक्सिजनको प्रतीक्षामा रहेका कोरोना संक्रमित । तस्वीरः अद्नान अविदी÷रोयटर्स
अक्सिजनको अभाव कम गर्ने विषयमा २०२० मै गठन भएको सरकारी कमिटीले किन काम गरेन भन्नेबारेमा पनि धेरै चासो नदेखाऔँ । दिल्लीका ठूलठूला अस्पतालमा समेत अक्सिजन प्लान्ट किन भएनन् भन्नेमा पनि निकै चासो नराखौँ । प्रधानमन्त्रीका नाममा स्थापित कोषको रकम व्यक्तिगत कोषको झैँ उपयोग किन भयो भन्नेतर्फ पनि धेरै चिन्तित नबनौँ । ’के मोदी अक्सिजन आपूर्तिमा समेत आफ्नो हिस्सा लिन चाहन्छन् ?’ अक्सिजन अभाव उनले हटाऊलान् त ?
’आस गरौँ, भर नपरौँ ।’
यी गतिविधिभन्दा पनि माथि मोदी सरकारका लागि बंगलामा चुनाव जित्नु झन् जरुरी थियो । त्यसैले गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधि त्यहीँ केन्द्रित गरे । विगतमा एकै दिनमा चुनाव भएको परिस्थिति थियो । तर, भारतीय जनता पार्टीका निम्ति नयाँ निर्वाचन क्षेत्र भएकाले उसले आफ्ना सबै गतिविधि त्यहीँ केन्द्रित ग¥यो । कोरोना महामारीका कारण निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर गर्न अन्य दलले आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । ती दलका माग अस्वीकार गर्दै पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै निर्वाचन गर्ने भनिदियो ।
’खोप पाउनेमा आस गरौँ, भर नपरौँ’
मोदी सरकारकै नेतृत्वमा भारतको अर्थतन्त्र केही खुम्चिएको छ । मध्यमस्तरको जीवन निर्वाह गरेकाहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । धेरै मानिस राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रम सन् २००५ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको थियो । खानलाउन नै धौधौ हुने परिवारले खोपका लागि पैसा तिर्न सम्भव नै छैन । बेलायतमा खोप मौलिक हकअन्तर्गत सित्तैमा लगाइन्छ । कर्पोरेट प्रभावमा परेका कारण भारतमा आमनागरिकका लागि खोप अब निःशुल्क हुने छैन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा मोदी समर्थित भारतीय टेलिभिजनको चिच्याहट छ, ’स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भयो । सबै प्रणाली ध्वस्त भयो ।’
भयावह परिस्थिति पछि ३ःयमष्ःगकतच्भकष्नल चलिरहेको छ । केही मिमहरूमा मोदीलाई कंकालका रूपमा चित्रित गरिएको छ । मोदी र अमित शाहलाई गिद्धका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको पाटो यो रह्यो तर वास्तविकता के हो भने उनीहरू भावनाविहीन मानिस हुन् । उनीहरू निरंकुश हुन् । उत्तर भारत भाजपाका लागि सबैभन्दा बढी भोटको इलाका हो, यसले सिङ्गो देशको भाग्य निर्धारण गर्ने सामर्थ्यसमेत राख्ने गर्छ । मोदीलाई पीडा दिने सामर्थ्य त्यहाँका जनतामा नै निहित छ ।
फेड्रिक डुग्लासले भनेका छन्, ’तानाशाहको आयु दमनमा परेकाहरूको धैर्यता नटुट्दासम्म मात्रै हो ।’ मोदीको तानाशाही प्रवृत्तिलाई त्यहाँका जनताले कहिलेसम्म सहलान् ? अवमूल्यनमा परेका उनीहरू कहिलेसम्म चुप बस्लान् ? समय आएपछि पक्कै उनीहरूले स्वेच्छाचारी शासकलाई तह लगाउलान् ।
यी सबै विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि भारतका बुद्धिजीवी, कर्पोरेट क्षेत्र, मिडिया सबैले उनलाई प्रधानमन्त्री हुन सहयोग गरे । उनको वाक्कला र काम गर्ने शैली राम्रो रहेको सबैको प्रतिक्रिया थियो । मोदीको आलोचना गर्नेहरूमाथि तुच्छ व्यवहार गरियो । उनीहरूले विपक्षी दलका नेताहरूप्रति गरेको मानहानि सुहाउँदिलो थिएन । कोभिड नियन्त्रणको प्रभावकारी तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराउने कांग्रेसका राहुल गान्धीमाथिको निकृष्ट टिप्पणीले विपक्षीको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै धज्जी उडायो ।
गार्जियनमा प्रकाशित सामग्रीलाई शिशिर ढकालले अनुवाद गरेका हुन् । साभार– शिलापत्र डटकमबाट
Prevकोरोनाबारे वामफ्रन्ट-द्वारा मानिसहरूलाई जागरूक
Nextआज३३ संक्रमितको मृत्यु, ५ हजार ७२७ जनामा संक्रमण